Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Dimuqraadiyadii way dhimatay waxa dilay Axmedsiilaanyo iyo Xisbigiisa waxa la sugaaba waa in xabaasha la geeyo oo la aaso. Dr Gaboose
Dimuqraadiyadii way dhimatay waxa dilay Axmedsiilaanyo iyo Xisbigiisa waxa la sugaaba waa in xabaasha la geeyo oo la aaso. Dr Gaboose
Gudoomiyaha urur siyaasadeedka UMMADA Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo ka mid ah ururadii ka qeybgalay doorashadii golayaasha degaanka ee ka dhacday SL 28-kii Nov, ayaa si weyn u dhaliilay qaabkii loo maamulayey doorashada isagoo ku eedeeyay guddiga doorashooyinka Somaliland iyo xisbiga Kulmiye inay galeen musuqmaasuq iyo xumeyn ay u geysteen dimuqraadiyada.
Dr. Gaboose oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa wuxuu sheegay in ururkiisu aanu ku qanacsaneyn gebi ahaanba natiijadii ay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka taasoo badideeda guusha lagu siiyey xisbiga Kulmiye, sida uu sheegay Dr. Gaboose.
“Annagu hadaanu nahay UMMADA marna kuma qancin sida wax loo maamulayey, natiijadana ma aan mid sax ah oo caddaaladi ku jirto, waayo doorashadan waxay ahayd mid loogu talagalay boob ee mahayn mid loogu talagalay in doorasho caddaalad ah ay ka dhacdo.” Ayuu yiri Dr. Gaboose.
Dr. Maxamed Cabdi Gaboose wuxuu shirkiisa jaraa’id ku sheegay in doorashadan ka hacday Somaliland ay tijaabo u ahayd dimuqraadiyada ay sheegato Somaliland balse xisbiga Kulmiye iyo madaxweyne Axmed Siilaanyo ay dileen, sida uu yiri, dimuqraadiyadii la sheegan jiray isla markaana hadda la sugayo in la aaso.
“Dimuqraadiyadii haddii ay dileen Kulmiye oo hadda naxashkii ay ku jirto dee waxaan sugnaa waa in la aaso oo xabaalaha la geeyo.” ayuu yiri Dr. Gaboose oo ku eedeeyay maamulka Hargeysa inay marin habaabiyeen qorshihii dimuqraadiyadda.
Wuxuu sheegay in isaga iyo xisbigiisa ay la socdaan sida ay wax u dheceen gaar ahaan qaabkii ay u dhacday doorashada oo uu sheegay in degmooyinka oo dhan aaney ka dhicin codeyn hufan ayna jirtay ku celcelin iyo meelo dhan oo waraaqihii la xaday, sida uu ku dooday.
Muqdisho cuqdad kama qabo
Dr. Gaboose ayaa shirkiisa jaraa’id lagu weydiiyey in haddii uu wax ka waayey maamulka Hargeysa halka uu aadi doono iyo inuu tagi doono Muqdisho oo siyaasiyiin badan u cararaan marka ay xil ka waayaan Hargeysa ayaa wuxuu ku jawaabay;
“Anigu wax cuqdad ah kama qabo Xamar, Xamar waa meeshii aan ku dhashay oo aan deganaa, dadka Xamar joogana waa dad wax badan naga dhexeeyaan.” ayuu yiri Dr. Gaboose oo intaasi raaciyey inuu joogi doono Hargeysa.
Ururka UMMADA ayaa ka mid noqonata ururada siyaasadeed ee dhaliilay doorasahdii deegaanka ee ka dhacday Somaliland dhamaadkii bishii hore taasoo weli muran badan uu ka taaganyahay.
Iraan Oo Hawlgalisay Shabkad Sida Youtubka Ah Kana Shuruudo Yar Una Gaar Ah Dunida Muslimka Xaalada SL Iyo Kooxda Ka Arimisa